Vivaldi 3.7 inovandudza mashandiro uye inowedzera kutsigira kweApple M1 | Linux Vakapindwa muropa
Yakajairwa kunyora nezve zvitsva maficha anomiririra iwo mavambo, kuvhurwa kwe Vivaldi 3.7 Zvinoratidzika kunge zvishoma. Mune dzimwe shanduro tataura newe, semuenzaniso, nezve browser yemuno tsamba yemutengi kana a mutsara wechipiri wematebhu, asi chikamu ichi hachitauri chero cheizvozvo. Chero zvazvingaitika, kusavapo kwenhau dzinotyisa hazvireve kuti hapana kuvandudzwa, uye ndeyekuti iyi vhezheni yebrowser yagamuchira imwe mhando yerudo.
Uye izvi hazvisi zvitsva. Ndokunge, kune vazhinji vanogadzira vanowedzera, vanowedzera, vanowedzera uye, kana nguva yacho yasvika, vanotarisa pakuita kuti zvese zvishande zvirinani. Uye ndizvo zvavakaita muVivaldi 3.7, kunatsiridza mashandiro uye mhanyisa. Mahwindo matsva anovhura 26% nekukurumidza, uye matabo anovhura zvakapetwa kaviri nekukurumidza. Izvi, izvo zvinogona kuva masekonzi patinenge tichizviita kamwe chete, zvinogona kududzira kuita maminetsi pakupera kwezuva.
Vivaldi 3.7 inosimbisa
Ruzivo runonyanya kuzivikanwa kumhanyisa uye kuita:
Mahwindo matsva anovhura 26% nekukurumidza.
Nyowani tabo dzinovhura 100% nekukurumidza.
Tsigiro yeApple M1, uko inoshanda kaviri nekukurumidza.
Nguva nenguva recharge mumapaneti ewebhu.
Ronga rakazara tabhu bha nemaviri kudzvanya.
Anogadziridzwa mamapeji ewebhu peji.
Mamwe masimba anokurumidza kukurumidza.
Silent inogadziridza muWindows.
Kana iwe uchifarira kuona iro rakazara uye rakadzama rondedzero yeshanduko, inowanikwa mune iyo kusunungura chinyorwa naVivaldi 3.7. Iyo nyowani vhezheni zvino inogona kutorwa pasi kubva ku purojekiti webhusaiti mu DEB, RPM, uye Windows uye macOS mapakeji. Vashandisi varipo veshanduro dzakadai seUbuntu, uko iyo repository inowedzerwa otomatiki mushure mekutanga kuisirwa, ichave iine iyo yekuvandudza inowanikwa mune software nzvimbo. Mamwe masisitimu anoshanda, akadai seaya anoshandisa AUR, anozove nawo mumaawa mashoma kana mazuva anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vivaldi 3.7 inovandudza mashandiro uye inowedzera rutsigiro rweApple's M1